Somali News 09.14.21 | KWIT
Ururka Waxbarashada Magaalada Sioux oo matalaya macallimiinta degmada ayaa email u diray xubnaha guddiga. Waxay leedahay qayb ahaan, ururka dawladdu ma qaadanayo mawqif kooxeed. Guddoomiyaha ururka maxalliga ah ee soo diray emaylka, ayaa u sheegay Warbaahinta Dadweynaha Siouxland inay sheegtay inay ku faraxsan tahay in guddiga dugsigu leeyahay kantaroolka maxalliga ah. Laakiin, tan iyo markii kulanka si degdeg ah loogu yeeray, ururku ma helin waqti uu kula kulmo xubnaha. Waxay ka maqashay qaar raba maaskaro iyo qaar aan rabin. Si kastaba ha ahaatee, macallimiinta la tallaalay ayaa xiran maaskaro si ay ugu difaacaan kuwa difaaca jirkoodu daciif yahay.
Degmada Dugsiyada Dadweynaha ee Des Moines ayaa qaaday tallaabo degdeg ah iyada oo dib u soo celisay maaskaro laga bilaabo Arbacada. Sidoo kale Magaalada Iowa iyo Degmooyinka Dugsiyada Bulshada ee Cedar Rapids.
Kordhinta kiisaska Iowa ee COVID-19 waxay heleen uumi dhammaadkii usbuuca.
New York Times ayaa werisay in celceliska maalinlaha ah ee Iowa ee kiisaska cusub uu ahaa 27% labadii toddobaad ee dhammaaday Axaddii.
Si kastaba ha ahaatee, faa'iidada isbitaallada gobolka oo dhan ayaa xoogaa hoos u dhacday. Laga bilaabo Axaddii, isbitaallada la dhigay waxay ahaayeen 3% laba toddobaad gudahood. Degmada Woodbury waxay aragtay 60% boodid laga bilaabo 1-da Sebtember ilaa 8-aad bukaannada lagu daweynayo COVID-19 oo keliya, iyadoo 17 isbitaal la soo sheegay Arbacadii la soo dhaafay Caafimaadka Dadweynaha Siouxland. Waaxda caafimaadka ee deegaanka ayaa soo saarta wararka toddobaadlaha ah.
Golaha Magaalada Sioux ayaa shalay laalay qaraar qeexayay in guurku uu u dhaxeeyo kaliya nin iyo naag.
Guddiga La -talinta Magaalada Sioux ee loo dhan yahay ayaa ka codsaday golah